» डा. भीम रावल कड्किदै भन्छन्, “गठबन्धनको सरकारलाई एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन” डा. भीम रावल कड्किदै भन्छन्, “गठबन्धनको सरकारलाई एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन” – हाम्रो खबर
डा. भीम रावल कड्किदै भन्छन्, “गठबन्धनको सरकारलाई एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन”
काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार नभएको बताएका छन्। गृहजिल्ला अछामका एमाले का’र्यकर्ताहरुसँग आज (शनिबार) काठमाडौंमा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई स’म्बोधनका क्रममा उनले यस्तो ब’ताएका हुन्।
उनले भने, ‘५० दिनसम्म सरकार विस्तार नगर्ने यो अयोग्यता हो।यो सरकारका गतिविधि स्वा’भिमानी कुनै देश’भक्त नागरिकलाई मान्य हुँदैन।’ उनले तुइन घटनाबारे भारतसँग सोधी’खोजी गर्न नसक्ने सरकारले जनताको प्र’तिनिधित्व नगर्ने समेत औल्याएका छन् ।
यो पनि,,,, केपी ओलीको गर्जन,”हाम्रा घरका बिरालाहरू देउवाको भान्सामा दूधभात खान पुगे”,,काठमाडौ ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी बनाएका माधव नेपाल पक्षप्रति कटाक्ष गरेका छन् । शनिवार काठमाडौँमा भएको पा’र्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले माधव नेपालले नेकपा एस पार्टी बनाएको नभई काँग्रेस र देउवाका लागि ‘यस’ पार्टी बना’एको भन्दै व्य’ङ्ग्य गरे ।
उनले एमाले छोडेर अहिलेको सरकारमा जान तयार गरिरहेकाहरुलाई देउवाको भान्छामा दूध भात खान गएका बिरालाहरूको संज्ञा दिए । उनले भने–‘अहिले हाम्रो घरका बिरालाहरू शेरबहादुर देउवाको भान्सामा पुगेका छन् । दूध र भात खान पाइन्छ भन्दै म्या’उ गर्दै ढु’क्नलाई पुगेका छन् ।’
उनले आगामी निर्वाचनमा पार्टीले जनप्रतिनिधि हुन लायकलाई मात्रै उम्मेदवार तोक्ने उल्लेख गरे । उनले काठमाडौँ महागरपालिकामा एमालेबाहेक अरू मेयर भन्नै नसुहाउने उल्लेख गरे । सक्षम नेतृत्व एमालेबाहेक अरू कसैको हुन नसक्ने उनको दाबी थियो ।
थप समाचार ,,,,गोकुल बाँस्कोटा भन्छन् ,”एमाले छाडेर माधब नेपालको पार्टीमा लाग्नेहरुले वडामा जितेर देखाऊ”,काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले जनताले एमालेलाई दिएको मत कांग्रेसको पाउमा लगेर शेर’वहादुर देउवालाई बेच्नेहरुले आफूमाथि प्रश्न उ’ठाउने नैतिक हैसियत नरहेको दा’वी गरेका छन् ।
जिल्ला कार्यकर्ता भेलालाई शनिवार बनेपामा सम्बोधन गर्दै बास्कोटाले आफूमाथि भ्रष्टाचारको आ’रोप लगाउनेहरुलाई पुष्टी गर्न चुनौति दिए । बाँस्कोटाले भने– ‘रा’ज्यका छानविनकारी निकायलाई चुनौती दिन्छु । म कठघरामा उभिन्छु । छानविन गर । हिम्त छ भने पुष्टि गर । जनताले एमालेलाई दिएको मत बेच्नेहरु महाभ्रष्ट हुन् । त्यस्ताले ममाथि आ’रोप लगाउनुको औचित्य छैन ।
उनले आफूले मन्त्री हुँदा पनि घरबाहाल बापतको रकम नलिएको बताए। ‘मन्त्री हुँदा पनि घ’रवहाल वा’पतको रकम लिइनँ । पार्टी अध्यक्षको घरमा गएर बसेको हुँ,’ बास्कोटाले भने ‘तर ममाथि आरोप लगाउनेहरु पार्टी कार्यालयको सम्पत्ति चोरेर हिड्नेहरु छन् ।उनले जिल्लामा आफ्नो पालामा इतिहासकै धेरै विकास भएकाले कांग्रेस समेत नतमस्तक भएपछि एमालेभित्रकै के’ही व्यक्ति भौतिक रुपमा सिध्याउने ष’डयन्त्रमा समेत लागेको बताए।